"I-Orange Rice House · I-Twilivaila" igumbi elihle lebhedi enkulu/i-100-inch highdefinition projection/iindledlana ezimbini kwisitrato sesithathu/shan Road/uhlanga/indawo yokungena engaphantsi komhlaba/ukupheka okufumanekayo/ibhafu - I-Airbnb
"I-Orange Rice House · I-Twilivaila" igumbi elihle lebhedi enkulu/i-100-inch highdefinition projection/iindledlana ezimbini kwisitrato sesithathu/shan Road/uhlanga/indawo yokungena engaphantsi komhlaba/ukupheka okufumanekayo/ibhafu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe ongu小鹿
Ubume boMzantsi buhlala buhle. Iimbongi zithanda ukuthambisa intwasahlobo yaseTshayina, ihlobo elifudumeleyo kunye nekwindla yegolide efudumeleyo.Kukho nezinye iimbongi ezithanda ukwenza i-icey jade-njengebusika, kodwa ndiyayithanda intwasahlobo.
Yonke le ndlu iyilwe, ikhethwe, yakhiwa yaza yalungiswa ngumnikazi wendawo ethambileyo, kwaye iyonke imibala iyahlaziya kwaye iphucukile.
Igumbi liqaqambile, linendawo yesakhiwo eyi-42 square metre. Ilungiswe kakuhle ibe iifestile ezinkulu zeglasi ziyibonisa kakuhle indawo ephakathi eNanning City.
Ibhedi enkulu ibekwe kwindawo ephambili yegumbi, ecaleni kwesofa, itafile yekofu kunye nebhari.Lonke igumbi libekwe kakuhle, indawo yokuhamba ipholile, kwaye indawo yokuphumla yeebhari ikhanya kwaye ilanga kulo lonke igumbi.
Ikhitshi linezinto zasekhitshini ezilula zokupheka. Igumbi lokuhlambela linezinto zokuthambisa, oomatshini bokomisa iinwele, njl.
Ifumaneka kufutshane neNational Square, kufutshane neShanshan Road Food Street kunye neChaoyang Business District, malunga neemitha eziyi-500 ukusuka kwisikhululo setreyini esingaphantsi komhlaba.
Umbuki zindwendwe ngu- 小鹿
Ukubhalisa xa ufika, ukuphuma:
Indlela ephucukileyo yokutshixa xa ufika yenza ukuhlala kwakho kungabi naxhala.Ikhadi lesazisi elichanileyo liyafuneka ukuze libhaliswe. Nceda uqonde ukuba asizamkeli iindwendwe ezivela kwindawo yobhubhane ngeli xesha ~
[Ukuhlala] Uzihoye ngokuqhelekileyo izinto zegumbi
[Phuma] Nceda ugcine igumbi likwimeko entle kwaye liqoqoshekile xa uphuma, ucoce igumbi, enkosi ngentsebenziswano yakho.Ukuba ufuna ukushiya imithwalo yakho, nceda uqhagamshelane nombuki zindwendwe.
Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ukuba ufuna ~
Indlela ephucukileyo yokutshixa xa ufika yenza ukuhlala kwakho kungabi naxhala.Ikhadi lesazisi elichanileyo liyafuneka ukuze libhaliswe. Nceda u…